Tondra-drano ao amin'ny metro Madrid: antony sy vokany | Meteorolojia tambajotra
Tondra-drano ao amin'ny metro Madrid
Portillo Alemanina | | Safo-drano
Ny oram-be tsy mitsaha-mitombo dia mety hiteraka tondra-drano amin'ny tanàna. Ny rafitry ny rano maloto dia manana fahafahana hisakana rano sy fanivanana izay tototry ny habetsahan'ny rano latsaka ao anatin'ny minitra vitsy. Noho izany, matetika dia misy tondra-drano any amin'ireo faritra tratran'ny oram-be. ny tondra-drano ny metro Madrid Be dia be ny zavatra noresahina, satria DANA no nahatonga azy ireo. Loza no vokatr'izany.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho tsaroantsika ny zava-drehetra nitranga tamin'ny tondra-dranon'ny metro Madrid sy ny fiantraikany.
1 Toe-javatra any Madrid
2 Tondra-drano ao amin'ny metro Madrid
3 Fampitandremana amin'ny tondra-drano metro Madrid
4 tondra-drano panorama
Toe-javatra any Madrid
Miaraka amin'ny savorovoro faobe amin'ny fifamoivoizana, difotry ny rano ny trano ary ny fanakatonana ny ampahan'ny metro noho ny rotsak'orana androany maraina, Tsy afaka nanomboka ny fahavaratra tamin'ny fomba ratsy kokoa i Madrid. Ny fampitandremana volomboasary ho an'ny orana sy ny tafiotra (risika lehibe) dia notazonina ho an'ny faritra Metropolitan sy Henares, raha ny fampitandremana mavo (risika) ho an'ny faritra sisa.
Manoloana izany toe-javatra izany, nanangana ny Fandaharanasa manokana ho fiarovana ny olom-pirenena amin'ny loza ateraky ny tondra-drano (InunCAM) manoloana ny toetry ny fanairana ny Community of Madrid. Tamin'ny 1 Septambra, nanorana ny toetr'andro manerana an'i Espaina: nisy tafio-drivotra sy fampitandremana momba ny oram-baratra tany amin'ny faritra rehetra, ary vondrom-piarahamonina dimy no niambina volomboasary.
Araka ny tatitry ny Madrid 112 Emergency, ny sampan-draharahan'ny vonjy taitra Madrid 112 dia nandamina antontan-taratasy miisa 237 mifandraika amin'ny tafiotra teo anelanelan'ny 00:00 sy 07:00. Ny faritra misy fampitandremana be indrindra ao amin'ny faritra dia: Alpedrete, Valdemoro, Parla, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid ary Madrid. Ny mpamono afo ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao Madrid dia tsy maintsy nanao fandraisan'anjaran'ny 50, ireo rehetra ireo dia mifandraika amin'ny tondra-drano amin'ny trano sy ny fotaka eny an-dalana. Na izany aza, tsy nisy tamin'izy ireo no tena matotra.
Amin'ny lafiny iray, ny mpamono afo ao amin'ny filankevitry ny renivohitra dia nanao fitsangatsanganana 58 mifandraika amin'ny rivo-doza, na dia tsy matotra aza. Ny olana lehibe amin’izy ireo dia ny dobo filomanosana eny amin’ny lalam-bahoaka, ny trano misy setroka ary ny rantsan-kazo esorina satria misy fotoanan’ny rivotra ihany koa.
Nisy oram-be ihany koa nisy fiantraikany tamin'ny zotra metro Madrid maromaro. Ny zotra faha-5 eo anelanelan'ny fiantsonan'i Pirámides sy Oporto ary ny zotra faha-9 eo anelanelan'i Kolombia sy Plaza de Castilla dia nikatona tamin'ny vao mangiran-dratsy, saingy andrasana hilamina ny fifamoivoizana ao anatin'ny ora vitsivitsy. Etsy ankilany, Nahitsy ny fahatapahan-jiro tamin’ny tobim-piantsonana maromaro amin’ny zotra 1 sy ny toby fiantsonana Rivas Vaciamadrid (Andalana faha-9).
Namorona dobo rano be tao an-drenivohitra ny tafio-drivotra ary nanapaka ny tonelina tao amin'ny Plaza Carlos V sy Santa María de la Cabeza ao amin'ny Repoblika Dominikanina ny sampan-draharaha misahana ny vonjy taitra, ka nahatonga ny fitohanan'ny rano nositranina tamin'ny fanokafana indray ny tonelina rehetra.
Amin'ny andalana C3 sy C4 an'ny Cercanías sy Sol, nisy fiaran-dalamby voatery navily lalana tamin’ny tonelina Recoletos noho ny fahatarana 5 ka hatramin’ny 10 minitra noho ny rano tao anaty tonelina. Voakasika ihany koa ny fifamoivoizana an-dalambe eny ambonin’ny tany. Voatery nanapaka ampahan-dalana maromaro ny polisy monisipaly noho ny rano miandrona, izay nisy fiantraikany tamin'ny serivisy fiara fitateram-bahoaka EMT. Ny faritra tena olana dia Manuel Becerra, Princesa, Plaza de España, Genoa ary Alberto Aguilera.
Ny orana mivatravatra ao Madrid eo anelanelan'ny 8.30:10.00 sy 17:19 maraina dia mamela rano 4 hatramin'ny 17,3 litatra isaky ny metatra toradroa ao amin'ny faritry ny metropolitan. Araka ny voalazan'i Rubén del Campo, mpitondra tenin'ny Sampan-draharaham-pirenena momba ny toetr'andro (Aemet), dia nanangona 17,8 litatra isaky ny metatra toradroa ny Valan-javaboarin'i Retiro, XNUMX litatra teo amin'ny seranam-piaramanidina ary XNUMX litatra tany amin'ny toeran'ny oniversite.
Tena mafy ny orana indraindray: tao amin'ny Parque del Retiro sy Ciudad Universitaria dia nahatratra 6,3 litatra tao anatin'ny folo minitra monja. Na dia “oram-be nivatravatra aza izany, tsy nisy firaketana an-tsoratra”, hoy ny fanazavan’i del Campo, raha nampahatsiahy fa ny 31 mey no nitrangan’ny tafio-drivotra faran’izay ratsy indrindra izay mahatratra 17 litatra isaky ny metatra toradroa tao anatin’ny 10 minitra.
Fampitandremana amin'ny tondra-drano metro Madrid
Nandeha tamin'ny 9:00 ny filazana fahatapahana voalohany. "Ny loop L2 eo anelanelan'i Ópera sy Quevedo dia tapaka tamin'ny lafiny roa noho ny lozam-pifamoivoizana tao amin'ilay trano," hoy ny sioka Metro. Taty aoriana dia voalaza fa ny andalana faha-4 eo anelanelan'i Lista sy Goya dia noho ny antony mitovy. misy adiresy. Nitatitra ihany koa ny Metro fa tsy nijanona teo amin'ny Noviciado (L2), García Noblejas (L7), Barrio de la Concepción (L7) ary Plaza de España (L10 sy L3) ireo lamasinina noho ny "tranga tao amin'ny trano". Tamin'izany fotoana izany, tapaka ihany koa ny fifamoivoizana amin'ny L10 eo anelanelan'ny Tribonaly sy Batán.
Tao Principe Pío, fiaran-dalamby zotra faha-10 no nijanona tsy nisy mpandeha nandritra ny fahatapahan'ny zotra. Somary feno olona ny faritry ny lampihazo satria toerana fitaterana mivantana eo anelanelan’ny zotra 6 sy 10. Nisy ny nanontany ny mpiambina sy Ny mpiasan'ny metro no fomba haingana indrindra hahatongavana amin'ny toerana halehanao amin'ny lalana hafa.
Fotoana fohy taorian’ny 11.30:10, mpandeha teo amin’ny roapolo teo ho eo te-hiditra tamin’ny zotra faha-XNUMX teo amin’ny fijanonan’ny Plaza de España no niandry tamim-paharetana ny hamelan’ny mpiambina azy ireo hiditra. Io no andalana farany mila averina. Taorian'ny fampitandremana tamin'ny onjam-peo dia nesorina ny tombo-kase tao amin'ny escalator ary niverina tamin'ny laoniny ny toe-draharaha.
Miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro, miha-matetika ny tondra-drano noho ny fisian'ny tafiotra mahery vaika. Tsy maintsy atao ao an-tsaina fa ny mponina tsirairay dia tsy maintsy miomana amin'ireo tranga ireo mba hampihenana ny fahavoazana mety hitranga. Adidin’ny kaominina ny mametraka taratasy momba izany hanana drafitra hampihenana ny risika sy ny fahasimbana manoloana ny tondra-drano mba tsy hisian'ny zavatra toy ny tondra-drano ao amin'ny metro Madrid. Enga anie mba tsy hanimba loatra ny rivo-doza ateraky ny DANA mba hampihenana ny fandaniana sy ny fahasimbana eny amin’ny toeram-bahoaka sy ny trano.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tondra-dranon'ny metro Madrid ianao, ny vokatr'izany ary ny zavatra natao tamin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Safo-drano » Tondra-drano ao amin'ny metro Madrid